चोलेन्द्रलाई बिदा गर्नुको विकल्प छैन: संविधानविद् अधिकारी (अन्तर्वार्ता) - Dainik Online Dainik Online
चोलेन्द्रलाई बिदा गर्नुको विकल्प छैन: संविधानविद् अधिकारी (अन्तर्वार्ता)
प्रकाशित मिति : २९ कार्तिक २०७८, सोमबार ४ : ५०
संविधानविद् प्रा.डा. विपिन अधिकारी काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ लमा प्राध्यापनरत छन्। प्रधान्यायाधीशको राजीनामा माग्दै दुई सातादेखि नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलन, प्रमुख राजनीतिक दलहरूको मौनता र अबको निकासबारे न्युज कारखानाले प्रा.डा अधिकारीसँग गरेको कुराकानी:
न्यायको सिद्धान्तले त यी दुईवटै कुरालाई अपेक्षा गर्दछ, न्यायाधीशको हकमा। तसर्थ, उहाँले बिदा भएर जानुपर्छ भन्ने हो। जब प्रधानन्यायाधीशले यति सामान्य न्यायको सिद्धान्त बुझ्नुहुन्न भने न्यायमा स्वतन्त्रता र निष्पक्षताबारे के कुरा बुझ्नुभयो होलारु उहाँले राजीनामा गरेर जानुभयो भने सबैभन्दा राम्रो उपाय हो। उहाँले त्यसो नगर्नु चाहिँ दुर्भाग्य हो। तर, जब कानुन, नीति र परम्पराबमोजिम हिँड्दैन, कसैसँग कुनै हतियार बाँकी रहँदैन, अनि गर्ने भनेको त आन्दोलन नै हो। आन्दोलनबाहेक प्रधानन्यायाधीशलाई त्यहाँबाट बिदा गर्ने अरु विकल्प देखिँदैन।
उनीहरूको स्पष्ट विचार छ-उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) लाई एक निमेष पनि कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन। उहाँ त विवादास्पद भइसक्नुभयो, उहाँको विवादास्पद छविको छायाँमा ग्रहण लागेर न्यायपालिका बस्न सक्दैन। उहाँ बिदा हुनैपर्छ। तर, संसद्ले उहाँलाई किन बिदा गर्न सक्दैन भनेर मैले व्याख्या गरिसकेँ। यति विवाद भइसकेपछि केही गर्न नसके पनि सरकारले संसद्को बैठक डाक्नुपर्थ्यो। प्रतिनिधिसभाको क्षेत्राधिकार छ यसमा।
म न त बारसँग धेरै सम्बन्धित छु, न त बेन्चसँग। एउटा प्राज्ञिक व्यक्तिको हिसाबले पनि मेरो दृष्टिकोण के हो भने प्रधानन्यायाधीश बिदा भएर जानैपर्छ। निमेषभर बस्ने उहाँसँग अधिकार छैन, उहाँ विवादास्पद भइसक्नुभयो। विवादास्पद मानिसले कसरी अदालतको नेतृत्व गर्छ? एउटा स्वच्छ र पारदर्शी छवि उहाँको रहेन। अब उहाँलाई नेता मानेर सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कसरी अगाडि हिँड्न सक्छन् त? न्यायाधीशहरूले उहाँको व्यावसायिक नेतृत्वलाई कसरी स्वीकार गर्नुहुन्छरु आधारभूत धरातल नै उहाँले गुमाइसक्नुभएको छ।
तर,यी सबै काम गर्न नेतृत्वको स्पष्टता र पारदर्शीता आवश्यक हुन्छ, जुन अहिले चाहिँ खडेरी लागेको अवस्था छ। अर्को कुरा, जुनसुकै संस्थामा पनि समस्याहरू हुन्छन्, भएका समस्यालाई नियमित रूपमा समाधान गर्न नेतृत्वको क्षमता जरुरी हुन्छ। विवादास्पद व्यक्तिमा कसरी क्षमता हुन्छरु
सँगसँगै मैले भन्दै आएको छु,अहिले दुई(चारवटा केसहरूलाई आधार बनाएर सर्वोच्च अदालतको बारेमा ढ्यांग्रो ठटाउने प्रयास गरियो, म त्यो लाइनको मान्छे होइन। मलाई के लाग्छ भने त्यो ‘पार्टी स्प्लिट’सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश होस्, प्रतिनिधिसभा विघटनको केस होस् या दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनको केस होस्। यी सबै केसहरूमा सर्वोच्चले गरेको एउटा बहुमतको निर्णय छ, त्यो निर्णयको बारेमा मेरो समर्थन छ। एउटा संवैधानिक कानुनको विद्यार्थीका रूपमा म त्यसमा समस्या देख्दिनँ।
अब प्रधानन्यायाधीश त्यसमा पोलिनुभएको छ, उहाँले सफाइ दिने भनेर के गर्नू? जिल्ला अदालतमा कारबाही चल्दैन, कारबाही चल्ने ठाउँमा ताला लगाएर राखिएको छ। यस्तो अवस्थामा वकिलहरूले के गर्नेरु न्यायाधीशहरूले के गर्नेरुअनि मिल भन्दा कसरी मिल्ने अवस्था हुन्छ? एउटा विवादास्पद व्यक्तिसँग कसरी सँगै उभिन सकिन्छरु पारदर्शी छवि त हरेक न्यायाधीशले खोज्दछ, उसका लागि त समस्या भयो नि! भनिन्छ केसको एलोकेसनदेखि लिएर सही हो कि गलत हो भन्नेमा म छैन। त्यो प्रश्न नै असान्दर्भिक हो। व्यक्तित्वमा खडेरी परिसक्यो, आममानिसको आस्था नै छैन भने हरेक दिन कसरी काम गर्न सकिन्छ रु यसको बारेमा संवेदनशील मानिसहरूले बुझ्नुपर्ने अवस्था छ।
– यसमा के छ भने सरकार र दलहरू जसरी भए पनि राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न लालायित देखिन्छन्। सरकार, यसका घटक र प्रतिपक्ष पनि उस्तै हुन्। हिजोको जुन शक्ति सन्तुलन थियो, त्यो हामीले देखेकै हो। यो कालो, यो गोरो भनेर भन्ने अवस्था छैन। हामी सामान्य रूपमा के देख्छौं भने होडबाजी छ र यत्रो प्रयत्नपछि जुन संविधान लागू गरिएको छ, त्यसलाई अक्षरसस् पालना गर्ने र नेपालमा रुपान्तरणको एजेन्डालाई आफ्नो शक्ति, सामर्थ्य र उपयोग गर्ने एजेन्डा बनाउने, त्यो किसिमको दृष्टिकोण स्थापित हुन सकेन।
यो मान्यतालाई आत्मसात गर्दै प्रधानन्यायाधीशले बिदा लिनुपर्ने हो। उहाँलाई लाग्दो हो कि यो प्रधानन्यायाधीशको पद यति ठूलो रहेछ, यसमा जसरी पनि रहिरहनुपर्छ भनेपछि के भयो भने यो त व्यावसायिक स्वच्छताको कुरा मात्र रहेनछ। पद गए पनि घरबास जाने होइन, बिल्लीबाठ हुने होइन। एउटा पद मात्र जाने त हो नि!
सरकार वा प्रतिपक्षबाट हामीले अपेक्षा गर्ने भनेको चाहिँ त्यो एउटा विकल्प छ-संसदबाट यसको छिनोफानो गर्ने। त्यो विकल्प प्रयोग कहिले होला, कसरी होला भन्नेबारेमा एउटा मनासिब मान्छेले कुनै दृष्टिकोण राख्नसक्ने अवस्था छैन।